गुडिरहेको रेल भित्रै जवानीको जोसमा.. गर्दा..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गुडिरहेको रेल भित्रै जवानीको जोसमा.. गर्दा...
एजेन्सी । बेलायतको केटरह्याम रेल स्टेसनमा यात्रीले एक जोडी रेलभित्र यौनक्रियामा लिप्त रहेको भटेका छन्। ट्रेन स्टेसनमा रोकिएको थियो। अच्चम्मको कुरा के हो भने उनीहरूलाई अरूले आफ्ना क्रियाकलाप हेरिरहेको थाहा थियो, तर दुवैले त्यसको कुनै वास्ता गरेनन्। हेर्नेहरूले उनीहरूको यौन क्रियाकलापको भिडियो बनाइरहेका थिए।
मेट्रो यूकेका अनुसार फुटेजमा रेलको झ्यालबाट ती जोडी सहवास गरिरहेको देखिन्थ्यो। भिडियो बनाउने क्रममा मानिस हासिरहेका र उनीहरूलाई उत्साहित बनाइरहेका थिए। भिडियोमा कालो कपाल भएकी एक महिला आफ्नो पार्टनरसँग सेक्स गरिरहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो। यो भिडियो ह्वाट्स एपमा हजारौंपटक शेयर भइसकेको छ। समाचारपत्रमा खबर छ ।
बेलायतको यातायात प्रहरी प्रवक्ताले मेट्रो यूकेलाई बताए– ‘हामीलाई यस विषयमा जानकारी छ। अहिले रेलमा भएको यौनकार्यको भिडियो अनलाइन सर्कुलेट भइरहेको छ। यद्यपि यस मामिलामा जाँच भइरहेको छ र अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन।